AdSense နဲ့တွဲဖက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်လုပ်နိုင်သလား? - Learn Expert Blogging
Post category:Adsense / Affiliate Marketing ကို / Earn Money Online
သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် AdSense နှင့်တွဲဖက်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်ကျိန်းသေသုံးနိုင်သည်. သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုငွေကြေးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင်နှစ် ဦး စလုံး၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနေကြသည်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကွဲပြားသောနဖူးစည်းစာအရွယ်အစားကြော်ငြာများကိုပြခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကော်မရှင်တစ်ခုရရှိရန်.
ဂူဂဲလ်ကသင့်ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေးလင့်များကိုပြသရန်ကြော်ငြာများနှင့်အတူတရားဝင်ခွင့်ပြုသည်. ဒီနေရာမှာပုံ screenshot ဖြစ်ပါတယ်.
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခြင်း, ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုအချိန်အတော်ကြာစတင်ခဲ့တာ, ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ AdSense ကိုကန့်သတ်ထားသည်. အချိန်ကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူ, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
မကြာခင်မှာပဲငါသဘောပေါက်လာတယ်, သင် AdSense မှတစ်ဆင့်ငွေရှာနိုင်သည် 5000+ အကယ်၍ သင့်မှာသန်းနဲ့ချီတဲ့အသွားအလာအသွားအလာများရှိပြီးအမေရိကန်ကဖြစ်သင့်တယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ, ဗြိတိန်, ကနေဒါနိုင်ငံများကဲ့သို့.
ငါကန ဦး အဆင့်မှာဖြစ်သကဲ့သို့, အလွန်များပြားသော visitors ည့်သည်များရရှိရန်ခက်ခဲသည်.
AdSense နှင့်အမေဇုံ, တူညီသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအခြားတွဲဖက်ကြော်ငြာ
Affiliate နှင့်အတူ Adsense
Affiliate Marketing နှင့်အခြားကြော်ငြာကွန်ယက် -AdSense အခြားရွေးချယ်စရာ
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ blogging ဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုစတင်စတင်ခဲ့သည်. အဲဒီမှာငါရှာတွေ့ခဲ့သည် တရားဝင်ဂူဂဲလ်အကူအညီစာမျက်နှာ AdSense နှင့်တွဲဖက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရှင်းပြခြင်းသည် Amazon နှင့်အခြားတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်စေမည်သို့ပင်မူဝါဒကိုချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။.
ပြီးနောက်, ငါချက်ချင်း Amazon ရဲ့ affiliate အစီအစဉ်အတွက် sign up ကို. ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် AdSense မှလှပသော ၀ င်ငွေရရှိရန်လက်မခံနိုင်သော visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကိုသာရရှိခဲ့သည်။.
ဒီမှာတောင်မှ, သင်ဤ bogging လယ်ပြင်၌တစ် ဦး အစပြုသူဖြစ်လျှင်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြံပြုပါသည်, AdSense ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်မယ့်အစား, သငျသညျ Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်. ထို့နောက်, သင်သည်များစွာသော visitors ည့်သည်များစတင်လာသောအခါလပေါင်းများစွာပြီးနောက် AdSense သို့ဆက်သွယ်ပါ.
Affiliate ဝင်ငွေကို AdSense နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး. Affiliate marketing သည်သင်ဝင်ငွေတိုးပွားလာသောတိုးတက်လာသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည် 1000 + ဒေါ်လာအနည်းငယ်အလုံအလောက်အသွားအလာနှင့်အတူသင်လိမ့်မည်. ဒီမှာသာငွေရှာနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအထောက်အထားဖြစ်သည် 100 တစ်နေ့လျှင်အသွားအလာပေါင်း.
တစ်လလျှင် chance ည့်သည်တစ်ရာသာကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်၍ ဝင်ငွေရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ $70 AdSense မှတဆင့်တစ်လလျှင်.
သို့သော်, AdSense ၏ခွင့်ပြုချက်ရရန်နှင့်၎င်းနှင့် တွဲဖက်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ပညာရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကဘာမှမဆုံးရှုံးဘဲမင်းကဒေါ်လာပိုများနေလို့ပဲ. ဒီဟာကိုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ရှိမရှိ.
ဒီနေ့ AdSense သည်အစောပိုင်းနှစ်များနှင့်မတူပါ, ၀ င်ငွေကောင်းရန်လစာများများရရန်သင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်. Google AdSense သည် Google ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလွန်စမတ်ကျလာသည်နှင့်အမျှအားစိုက်ထုတ်မှုများစွာလိုအပ်လာသည်, သငျသညျလက်ရှိတစ်ရာရာခိုင်နှုန်းကိုအောင်မြင်ရန်မည်မဟုတ်.
ဘာဖြစ်နေတာလဲ? ကောင်းပြီ, ရှင်းလင်းချက်များစွာရှိသော်လည်းဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အကြံပြုပါသည် Ezoic အတွက်စာရင်းသွင်းပါ.
Ezoic သည် AdSense ကုဒ်ကိုဖော်ပြရန်၎င်း၏စမတ်အတုထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသော AdSense နှင့်အလားတူပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Ezoic မှခွင့်ပြုချက်ရရန်သင်သည် AdSense ၏မူဝါဒအားလုံးကိုလိုက်နာပြီးအတည်ပြုချက်ကိုရယူရမည်. သင်ရှိပါက Ezoic ကြော်ငြာများကိုအလိုအလျောက်ရနိုင်သည်.
ဒါကြောင့် EZOIC နှင့် AdSense ဝင်ငွေကွာခြားချက်ကဘာလဲ, ဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပါရစေ. သင်လာပြီဆိုပါစို့ 2000 ယူနိုက်တက်စတိတ်မှစာမျက်နှာအမြင်များ, AdSense ၏ဖြစ်ရပ်၌တည်၏, ငါတို့အကြောင်းကိုသာမသိကြ $5 ကြည့်ရှုသူတစ်ထောင်လျှင်သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Ezoic ကြော်ငြာများကိုထည့်သွင်းပါကသင်နီးပါးရှိလိမ့်မည် 10 ရန် 12 ဒေါ်လာအလွန်လွယ်ကူစွာထက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်.
သငျသညျကားမောင်းအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်လာလျှင် 50000 ည့်သည်များ 100000 တစ်လလျှင်စာမျက်နှာအမြင်များကိုကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်သင်ပိုမိုတိုးတက်သောပလက်ဖောင်းများသို့လွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည် မီဒီယာလာနေသည် ဒါမှမဟုတ် Adthrive. ဤရွေ့ကားနှစ်ခုသည်အခြားပလက်ဖောင်းတကယ်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်အီးဖြစ်ကြသည်.
ယေဘုယျအား, သငျသညျ AdSense ထံမှအဖြစ်နှစ် ဦး စလုံး Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှတဆင့်ငွေရှာဖို့နည်းလမ်းအောင်လျှင်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပါတယ်. သင်သည်၎င်းကိုဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲလည်ပတ်နိုင်သည်. ကနှင့်အတူ, Ezoic ကဲ့သို့ AdSense အစားထိုးများကိုလည်းသင်စဉ်းစားသင့်သည်, မီဒီယာစပျစ်နွယ်ပင်နှင့်ကြော်ငြာရှင်သန်, စသည်တို့. ဒါဟာပိုပြီးအကျိုးအမြတ်ရှိမယ်၊.
Domain နာမည်ဝယ်ပြီးနောက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ပုံ?
Google AdSense နဲ့ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ
ကျွန်ုပ်၏ Host မှ SSL ကိုဝယ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
Previous PostGoogle AdSense နဲ့ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ?
Next PostAmazon Affiliate Marketing သည်ထိုက်တန်သလား?
သင် WordPress ဘလော့ဂ်မှငွေမည်မျှယူနိုင်သည်?